भारतमा बीमा कम्पनीहरु ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग गर्दै, यस्तो छ कारण ? – Insurance Khabar
भारतमा बीमा कम्पनीहरु ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग गर्दै, यस्तो छ कारण ?
प्रकाशित मिति : १७ जेष्ठ २०७७, शनिबार १८:२८
भारतका केही बीमा कम्पनीहरुले जुन महिना भित्र ५००० भन्दा धेरै कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी गरेका छन् । अन्य धेरै कम्पनीहरुले कर्मचारी कटौती गरेकोमा भारतका ५ ठूला बीमा कम्पनीहरु भने आक्रामक रुपमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारीमा छन् ।
भारतीय संचार माध्यमका अनुसार कोरोना माहामारी र लकडाउन पश्चात बीमा क्षेत्रमा ठूलो उछाल आउने आँकलन गरेकाले सोको लागि केही बीमा कम्पनीहरु अहिले नै कर्मचारी भर्ना गर्न लागेका छन् ।
पीएनबी मेट लाईफ इन्स्योरेन्सले १५०० थप कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारीमा छ र सो संख्या ३००० हजारसम्म पुग्न सक्ने छ । केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इन्स्योरेन्सले १००० थप कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारीमा छ ।
निर्जीवन बीमा कम्पनी टाटा एआईजीले १००० थप कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारीमा छ भने टाटा एआईए लाइफले ५०० थप कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारीमा छ ।
रिलायन्स निपोन लाईफ इन्स्योरेन्सले ३०० नयाँ कर्मचारी भर्ना गरिसकेको र ४०० थप कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारीमा छ । कोरोना महामारी पश्चात जनतामा बीमाको महत्त्त्व अझै धेरै बढ्ने र सो को कारणले गर्दा बीमा व्यवसायमा राम्रो वृद्धि देखिने विश्वास गरिएको छ।
समाचार श्रोत : Economic Times